Taylor Swift မှာ ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာအချက်လေးတွေရှိနေတာ သိရဲ့ လား? – Trend.com.mm
Taylor Swift မှာ ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာအချက်လေးတွေရှိနေတာ သိရဲ့ လား?
Posted on June 1, 2018 by Noel
Swiftie လေးတွေရှိကြလား?Taylor Swift ဆိုတာယောက်ျားလေးပရိသတ်တင်မက မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေပါ တပုံတအောပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ချစ်စရာအဆိုတော်မလေးပါ။ သူမရဲ့အကြောင်း ကထူးပြီးညွှန်းစရာမလိုလောက်အောင် Swiftလေး အရည်အချင်း ဘယ်လောက် ရှိတယ်ဆိုတာ အားလုံးကသိပြီးသားပါ။အခုလတ်တလောမှာလည်း ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပနေပါတယ်။တကယ်လို့ သင်က မတ်မတ်ဆွစ်ဖ်ရဲ့ ဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြာင်း အရာလေး တွေ မသိထားရင် Swiftie တစ်ယောက်မပီသဘူးနော်။ Taylor Swift ရဲ့ Fan girl
Swiftie မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင် ဒါလေးတွေဖတ်ပြီးတဲ့အခါ သင်က Swiftie လေးဖြစ်သွားမှာ သေချာသလောက်ပါပဲ။ကဲ ဘာတွေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
၁)Taylor Swift ဟာ ဂစ်တာ၊ဘင်ဂျို၊စန္ဒယား၊Ukulele ဂစ်တာ စတဲ့တူရိယာလေးမျိုးကို တီးခတ်တတ်ပါတယ်တဲ့။အဆိုတင်ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။
၂)Swift လေးက ဒီလိုနာမည်ကျော်စတားအဖြစ်ဂီတလောကထဲမ၀င်ခင် ငွေရေးကြေးရေး ဆိုင်ရာအကြံပေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါတဲ့။
၃)သူမရဲ့ အသက် ၁၂မှာ “Lucky You” ဆိုတဲ့သီချင်းလေး စရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၄)အသက် ၁၄နှစ်မှာတော့ Sony/ATV music က ငှားရမ်းခဲ့တဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး သီချင်းရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၅)ထူးထူးခြားခြားပါပဲ။Taylor Swift ဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက သူမတို့မိသားစု ကမ်းခြေအိမ်လေးနားကို သောင်တင်လာတဲ့ငါးမန်းတစ်ကောင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၀တ္ထုရေးခဲ့တာ နွေရာသီကာလတစ်လျှောက်လုံးပါပဲတဲ့။
၆)သူမ အမေရဲ့ အဘွားဖြစ်သူဟာ Marjorie Finlay ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာကသိတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်၊Opera အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
၇)”You Belong With Me” သီချင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ ခပ်ကြီးကြီးမျက်မှန်ဟာ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်မျက်မှန်မဟုတ်ပေမဲ့ သူမမှာ အဲ့ဒီလိုဒီဇိုင်းနဲ့ဆင်တူတဲ့မျက်မှန်မျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။
၈)Swift လေးဟာ အနုပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာရေး၊ကလေးငယ်တွေရဲ့ ပညာရေး၊ သဘာဝဘေးဒုက္ခခံစားရသူတွေ၊နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ ကူညီလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကြင်နာသနားတတ်ပြီးစိတ်ထားမွန်မြတ်တဲ့အဆိုတော်မလေးပါ။သူမရဲ့ ဒီလိုကူညီမှုတွေက မရေမတွက်နိုင်အောင်ပါပဲ။
၉)Album of the Year Grammy ဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့အသက်အငယ်ဆုံးအနုပညာရှင်လေး လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အယ်လ်ဘမ် Fearless ကအသက် ၂၀အရွယ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး အခုလိုဆုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀)Swift လေးဟာ ကဗျာဆရာ Pablo Neruda ရဲ့ ကဗျာတွေကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး သူမရဲ့ အယ်လ်ဘမ် Red ထဲက စာသားတစ်ချို့က “Poem 20″ထဲက စာသားတွေပါဝင်ပါတယ်။
၁၁)Taylor Hanson ကိုလည်း သူမနဲ့နာမည်တူလို့ သဘောကျနှစ်သက်ခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့။
၁၂)သူမရဲ့ အမေအတွက် ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်အဖြစ် “The Best Day” ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို ကိုယ်တိုင်ရေးဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
၁၃)Taylor က တကယ့်နာမည်ကျော်တွေဖြစ်တဲ့ Elvis Costello ၊ James Taylor ၊ Stevie Nicks နဲ့ Dolly Parton တို့ရဲ့ ချီးကျူးမှုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၄)ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးအနှံ့ သန်း ၂၀ကျော်နီးပါးရှိတဲ့အယ်လ်ဘမ်တွေကို ရောင်းချနိုင်ခဲ့သူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၅)နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ Taylor က တစ်ခြားဘယ်သူနဲ့မှယှဉ်ပြိုင်ပြီး တိုးတက်အောင်လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ သူမရဲ့ တိုးတက်လာတဲ့စံချိန်အသစ် မှတ်တမ်းတွေနဲ့သာ သူမကိုယ်သူမ ယှဉ်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ဒီအချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Taylor Swift ဟာ ဂီတအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်သလို လူသားအချင်းချင်းပေါ်မှာလည်းစာနာထောက်ထားတဲ့စိတ်လေးပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးဖြစ်မှန်းပေါ်လွင်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်း သူမဟာ လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ခံရသလို
ပရိသတ်အရွယ်စုံရဲ့  အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဒါလေးတွေဖတ်ပြီး Swiftie လေးဖြစ်ချင်သွားပြီဟုတ်!
Swiftie လေးတှရှေိကွလား?Taylor Swift ဆိုတာယောကျြားလေးပရိသတျတငျမက မိနျးကလေး ပရိသတျတှပေါ တပုံတအောပိုငျဆိုငျထားတဲ့ခဈြစရာအဆိုတျောမလေးပါ။ သူမရဲ့အကွောငျး ကထူးပွီးညှနျးစရာမလိုလောကျအောငျ Swiftလေး အရညျအခငျြး ဘယျလောကျ ရှိတယျဆိုတာ အားလုံးကသိပွီးသားပါ။အခုလတျတလောမှာလညျး ကမ်ဘာလှညျ့ဖြျောဖွပှေဲ ကငျြးပနပေါတယျ။တကယျလို့ သငျက မတျမတျဆှဈဖျရဲ့ ဒီလိုစိတျဝငျစားဖှယျရာအကွာငျး အရာလေး တှေ မသိထားရငျ Swiftie တဈယောကျမပီသဘူးနျော။ Taylor Swift ရဲ့ Fan girl
Swiftie မဟုတျဘူးဆိုရငျတောငျ ဒါလေးတှဖေတျပွီးတဲ့အခါ သငျက Swiftie လေးဖွဈသှားမှာ သခြောသလောကျပါပဲ။ကဲ ဘာတှလေဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
၁)Taylor Swift ဟာ ဂဈတာ၊ဘငျဂြို၊စန်ဒယား၊Ukulele ဂဈတာ စတဲ့တူရိယာလေးမြိုးကို တီးခတျတတျပါတယျတဲ့။အဆိုတငျကောငျးတာမဟုတျပါဘူးနျော။
၂)Swift လေးက ဒီလိုနာမညျကြျောစတားအဖွဈဂီတလောကထဲမဝငျခငျ ငှရေေးကွေးရေး ဆိုငျရာအကွံပေးသူတဈယောကျဖွဈခငျြခဲ့တာပါတဲ့။
၃)သူမရဲ့ အသကျ ၁၂မှာ “Lucky You” ဆိုတဲ့သီခငျြးလေး စရေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
၄)အသကျ ၁၄နှဈမှာတော့ Sony/ATV music က ငှားရမျးခဲ့တဲ့ အသကျအငယျဆုံး သီခငျြးရေးဆရာတဈယောကျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
၅)ထူးထူးခွားခွားပါပဲ။Taylor Swift ဟာ ဆယျကြျောသကျအရှယျတုနျးက သူမတို့မိသားစု ကမျးခွအေိမျလေးနားကို သောငျတငျလာတဲ့ငါးမနျးတဈကောငျနဲ့ ပတျသကျပွီး ဝတ်ထုရေးခဲ့တာ နှရောသီကာလတဈလြှောကျလုံးပါပဲတဲ့။
၆)သူမ အမရေဲ့ အဘှားဖွဈသူဟာ Marjorie Finlay ဆိုတဲ့ နိုငျငံတကာကသိတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျ၊Opera အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
၇)”You Belong With Me” သီခငျြးထဲမှာပါဝငျခဲ့တဲ့ ခပျကွီးကွီးမကျြမှနျဟာ သူမရဲ့ ကိုယျပိုငျမကျြမှနျမဟုတျပမေဲ့ သူမမှာ အဲ့ဒီလိုဒီဇိုငျးနဲ့ဆငျတူတဲ့မကျြမှနျမြိုးရှိခဲ့ပါတယျ။
၈)Swift လေးဟာ အနုပညာနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ပညာရေး၊ကလေးငယျတှရေဲ့ ပညာရေး၊ သဘာဝဘေးဒုက်ခခံစားရသူတှေ၊နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့ကလေးငယျတှကေို ကူညီစောငျ့ရှောကျပေးနတေဲ့အဖှဲ့အစညျးတှအေတှကျ ဒျေါလာထောငျပေါငျးမြားစှာ ကူညီလှူဒါနျးခဲ့တဲ့ ကွငျနာသနားတတျပွီးစိတျထားမှနျမွတျတဲ့အဆိုတျောမလေးပါ။သူမရဲ့ ဒီလိုကူညီမှုတှကေ မရမေတှကျနိုငျအောငျပါပဲ။
၉)Album of the Year Grammy ဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့အသကျအငယျဆုံးအနုပညာရှငျလေး လညျးဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ အယျလျဘမျ Fearless ကအသကျ ၂ဝအရှယျမှာ ထှကျရှိခဲ့ပွီး အခုလိုဆုရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
၁၀)Swift လေးဟာ ကဗြာဆရာ Pablo Neruda ရဲ့ ကဗြာတှကေိုခဈြမွတျနိုးပွီး သူမရဲ့ အယျလျဘမျ Red ထဲက စာသားတဈခြို့က “Poem 20″ထဲက စာသားတှပေါဝငျပါတယျ။
၁၁)Taylor Hanson ကိုလညျး သူမနဲ့နာမညျတူလို့ သဘောကနြှဈသကျခဲ့ဖူးပါတယျတဲ့။
၁၂)သူမရဲ့ အမအေတှကျ ခရဈစမတျလကျဆောငျအဖွဈ “The Best Day” ဆိုတဲ့သီခငျြးလေးကို ကိုယျတိုငျရေးဆိုခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။
၁၃)Taylor က တကယျ့နာမညျကြျောတှဖွေဈတဲ့ Elvis Costello ၊ James Taylor ၊ Stevie Nicks နဲ့ Dolly Parton တို့ရဲ့ ခြီးကြူးမှုကိုလညျးရရှိခဲ့ပါတယျ။
၁၄)ကမ်ဘာတဈဝနျးလုံးအနှံ့ သနျး ၂ဝကြျောနီးပါးရှိတဲ့အယျလျဘမျတှကေို ရောငျးခနြိုငျခဲ့သူ တဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။
၁၅)နောကျဆုံးတဈခကျြကတော့ Taylor က တဈခွားဘယျသူနဲ့မှယှဉျပွိုငျပွီး တိုးတကျအောငျလုပျတာမြိုးမဟုတျပဲ သူမရဲ့ တိုးတကျလာတဲ့စံခြိနျအသဈ မှတျတမျးတှနေဲ့သာ သူမကိုယျသူမ ယှဉျပွိုငျတာဖွဈပါတယျတဲ့။
ဒီအခကျြတှကေိုကွညျ့မယျဆိုရငျ Taylor Swift ဟာ ဂီတအနုပညာနဲ့ပတျသကျပွီးကြှမျးကငျြသလို လူသားအခငျြးခငျြးပျေါမှာလညျးစာနာထောကျထားတဲ့စိတျလေးပိုငျဆိုငျထားသူလေးဖွဈမှနျးပျေါလှငျနပေါတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့လညျး သူမဟာ လူငယျပရိသတျတှရေဲ့အခဈြခံရသလို
ပရိသတျအရှယျစုံရဲ့အားပေးမှုအခိုငျအမာရရှိနတောပဲဖွဈပါတယျ။
ကဲ ဒါလေးတှဖေတျပွီး Swiftie လေးဖွဈခငျြသှားပွီဟုတျ!
SM Entertainment နဲ့စာချုပ်အသစ်ချုပ်ရတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ SHINee အဖွဲ့